Fa maninona no tsy avy tahaka ny mahazatra an’i Ginea-Bisao ny orana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2015 7:23 GMT
Vakio amin'ny teny Português, русский, Español, Français, Magyar, Nederlands, Italiano, Ελληνικά, English
Mampatahotra amin'ny mahalonaka ny tany sy ny fiavotan-tenan'ny mponina ao Ginea-Bisao ny orana sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, hoy ny tatitry ny lahatsary iray navoakan'ny Bagabaga Studios.
Ny vaovao avy amin'ny tranonkala O Democrata no nanampy fa “vakin'ny tondra-drano ny fefiloha miaro natao ho sakana sy nisorohana ny fidiran'ny ranontsira ao amin'ny faritry ny ranomamy misy ny sakafo nambolen'ny Gineana sy efa andalam-pahavokarana.”
Ity sarimihetsika fohy ity dia navoaka tamin'ny herinandro nanombohan'ny Fihaonamben'ny Toetrandro 2015 tao Parisy, mitondra ireo mpanapakevitra avy amin'ny firenena 195 mandritra ny 12 hitadiavana fifanarahana hampihenana ny fandefasana eton'arina manerantany.
Nikabary tao amin'ny zaikabe ny filohan'i Ginea Bisao, Atoa José Mário Vaz, manoritra fa iray amin'ireo firenena marefo indrindra eo amin'ny vokatry ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina ny firenena kely ao Afrika Andrefana. Ny sarintanin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro navoakan'ny Foiben'ny Fampandrosoana Manerantany dia mandahatra an'i Ginea Bisao ho fahatelo amin'ny faharefoana manoloana ny fiakaran'ny ranomasina sy fahavalo eo amin'ny faharefoana vokatry ny fahaverezan'ny voka-pambolena.
“Tsapan'ny mponina manerana an'i Afrika ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro manerantany,” hoy ny fanazavana navoakan'ny mpiara-miasa amin'ny Global Voices, 350.org, tamin'ny 28 Aogositra. “Voaporofo fa miantraika any amin'ny fahasalamana, ny manan'aina, ny fahavokaran'ny sakafo, ny fisian-drano azo sotroina, ary ny fiarovana ankapobeny ao amin'ny vahoaka Afrikana ny fiovana eo amin'ny maripana.”